Na Ngbanwe, Ọkachamara na Uru - Azịza nye akụkọ Prọfesọ Yoram Yuval, "Ha adịghị atụgharị", Shabbat P. P. Akef Mgbakwunye - Kọlụm Na-aga n'ihu (Column 26) - Rabbi Michael Avraham
Azịza - Isi
Nzaghachi - Halacha
Nzaghachi - Meta Halacha
Azịza - Okwukwe
Azịza - Torah na Sayensị
Nzaghachi - Ọmụmụ Talmudic
Azịza - Nkà ihe ọmụma
Nzaghachi - omume
Azịza - General
Ndị nta akụkọ
Nkwupụta na pịa
Ozi sitere na ọgbakọ "Kwụsị iche echiche ebe a"
Akụkọ na bekee
Ihe nkuzi vidiyo
Shiurim dere na Tractates nke Shas
Site na mgbasa ozi
Akwụkwọ ndetu na ihe gbasara okwukwe
Alụmdi na nwunye nkeonwe
Ntụaka na iGod videos
Na Ngbanwe, Ọkachamara na Uru - Azịza nye akụkọ Prof. Yoram Yuval, "Ha anaghị atụgharị", Shabbat P. P. Akev - Kọlụm Na-aga n'ihu (Column 26)
Nkwupụta 8	/ 19 Elul 09 - 2016/XNUMX/XNUMX 19 / 09 / 2016
Na kọlụm nke gara aga Ekwuru m isiokwu Prof. Yoram Yuval na mgbakwunye Shabbat nke Makor Rishon P. n'ihi afọ a (XNUMX). Ị ga-ahụkwa mkparịta ụka malitere na backbacks n'okpuru m post.
E bipụtara nzaghachi m na Prof. Yuval's n'ụdị mkpirisi na mgbakwunye Shabbat P. Ra'a (yana Okwu ndị ọzọ Ọ dị mma ịmara na ha niile kwesịrị ịgụ ). Nke a bụ okwu m ka ebipụtara ebe ahụ:
Na ndịiche, nka na ụkpụrụ
(Nzaghachi na akụkọ Prof. Yoram Yuval, "Ha adịghị atụgharị", Shabbat supplement P. Akev)
Akụkọ Prọfesọ Yuval Luca nwere ngwakọta nke ụkpụrụ na eziokwu. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya igosi na ọdịiche a bụ kandụl dị n'ụkwụ nna nna ya nwụrụ anwụ a kpọtụrụ aha n'isiokwu ahụ, ọ bụkwa ihe nwute na ọ na-eleghara ya anya.
Okwu ya guzoro na ogidi atọ: 1. Ihe nlereanya maka mmekọrịta dị ukwuu na ọkachamara. 2. Nkọwa psychiatric nke mgbanwe mmekọahụ (enweghị ike ịhụ mmadụ dum n'anya). Nkwupụta sayensị sayensị: Mmekọ nwoke na nwanyị abụghị n'ihi nhọrọ kama ọ sitere na nzụlite organic, ọ na-esiri ike ịgbanwe ma dịkwa ize ndụ ịnwale. Ugbua ebe a na-ekwu na nkenke: 3. Nlereanya nke Yuval tụrụ aro ezighi ezi (lee isiokwu na ehihie G) yana ọ dịghị mkpa na mkparịta ụka ebe a. 1. Nkọwa uche gbasara mmụọ anaghị emetụta mkparịta ụka. 2. Ajụjụ ọkachamara ndị a adịghị mkpa na mkparịta ụka ahụ. M ga-ugbu a nkọwa.
Ozugbo m nọ ọdụ na kollel na Bnei Brak na nwa akwụkwọ bịakwutere m jụrụ ma iko bụ mmiri mmiri ma ọ bụ siri ike. Agwara m ya na n'ihe gbasara iwu Shabbat glass siri ike, ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta sayensị na-akọwa ya dị ka mmiri mmiri maka mkpa ọkachamara ha. Na ilu, ọ bụrụ na psychiatry na-akọwa mmekọahụ rụrụ arụ dị ka enweghị ike ịhụ mmadụ dum - ha ihere. Mana gịnị kpatara halacha ma ọ bụ omume ọma ga-eji were nkọwa ndị ọkachamara wee tinye ya na ọkwa normative? Ọzọkwa, nkọwa abụghị ihe nchoputa pụtara ìhè, ya mere ọkachamara enweghị uru karịa onye nkịtị n'ihe metụtara ha. Ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ nwere ike ma kwesị ịkọwapụta echiche ha maka mkpa ndị ọkachamara, mana nke ahụ enweghị ihe jikọrọ ya na ajụjụ nkịtị. Michel Foucault dere na nchoputa psychiatric juru eju na echiche bara uru. N'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ndị butere usoro ọgbara ọhụrụ n'anya m, o kwuru eziokwu banyere ya. Ọfọn, ugboro abụọ n'ụbọchị ọbụna elekere guzoro na-egosi oge kwesịrị ekwesị.
Onye dibia bekee nwere ike ikpebi ebe nwoke idina nwoke si malite. Ọ nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa, gburugburu ebe obibi, ma ọ bụ nzụlite ọzọ. Ọ pụrụ ikpebi ma a pụrụ ịgwọ ya na n'ụzọ ndị dị aṅaa, na ihe ndị si na ọgwụgwọ nke ọ bụla pụta. Ndị a bụ mkpebi ndị ọkachamara niile, ma na-eche na ihe ọmụma sayensị dị (na ọ bụ ezie na ọ bụghị zuru ezu na nke a, nke n'echiche m na-adịghị mesie ike zuru ezu na Yuval okwu), ọkachamara nwere ike inye ha azịza. Ma ajụjụ nke ma nke a bụ ihe mgbagwoju anya na otú e kwesịrị isi na-emeso ya bụ okwu nke nkọwa ụkpụrụ na ọ bụghị nke mkpebi ọkachamara (lee isiokwu ndị dị n'elu).
Okwu abụọ ọzọ:
A. Dịka obere ọkachamara n'ihe gbasara isi mgbaka, ana m enwe obi abụọ na nkọwa nke Yuval tụrụ aro maka mgbanwe n'omume isi mgbaka n'ebe nwoke idina nwoke nọ. N'uche nke m, nke a bụ mgbanwe nke ụkpụrụ na ọ bụghị nke sayensị-eziokwu. A ịrịba akụkụ nke ọha mmadụ taa na-ekwere na onu bụ bụghị omume ọjọọ (ọbụna obere onye na-ekweta na nke a) ya mere adịghị ahụ ya dị ka a deviation. A na-adọkpụrụ uche uche ebe a site na ụkpụrụ ọha mmadụ, ọ bụghịkwa ụzọ ọzọ. Chee echiche banyere kleptomania. Ka anyị chee maka ebumnuche nke mkparịta ụka ahụ na o sitere na mkpụrụ ndụ ihe nketa na enweghị ike ịgbanwe ya (gbanwee). Nke a ọ pụtara na kleptomania abụghị mgbanwe? Ọ bụ ihe amachibidoro izu ohi ma na-emerụ ahụ, ya mere ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkọwa kleptomaniac dị ka onye gbagọrọ agbagọ. Nke a bụ n'agbanyeghị n'eziokwu na ọbụna n'ebe ahụ nwere ọchịchọ izu ohi apụtaghị na onye ahụ na-ezu ohi n'ezie (dị ka Yuval kọwara banyere nwoke idina nwoke), na ọbụna n'ebe ahụ enweghị ike ịgwọ ya ma nwee mkpụrụ ndụ ihe nketa ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ (dị ka m chere maka nzube nke mkparịta ụka). Ihe dị iche n'etiti kleptomania na nwoke idina nwoke bụ na ọtụtụ ndị ọkachamara n'ọrịa uche taa kwenyere na ọ bụ ihe kwere ekwe na ọ dịghị njọ ịbụ nwoke idina nwoke, ebe a machibidoro ohi na-emerụ ahụ n'anya ha. O doro anyị anya na ihe ndị a bụ ụkpụrụ ọ bụghị eziokwu.
B. Yuval na-ede na "ndị okpukpe ọ bụla gụrụ akwụkwọ" maara na na ngalaba nlekọta ahụike nwere ike ịgha ụgha onye nwụrụ anwụ nke obi ya na-akụ. Echere m na m mara mma gụrụ akwụkwọ (ma mara mma okpukpe), na m n'ezie amaghị na. Ọzọkwa, ọbụna ya onwe ya amaghị ya. O nweghị ihe jikọrọ ya na agụmakwụkwọ (ọ bụ ezie na okpukperechi ma eleghị anya ee), enyí nnụnụ n'ihi na nkọwa nke ọnwụ na ndụ bụ normative na ọ bụghị ụlọ ọgwụ. Dọkịta ahụ nwere ike ikpebi, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ọrụ ndị dị na ọnọdụ dị otú ahụ, na gịnị bụ ohere nke ịlaghachi na ya na ndụ nkịtị. Ma ọ pụghị ikpebi ma ndị dị otú ahụ dị ndụ ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ, na-emekwa ọ bụghị ma o nwere ike inye akụkụ (nke na m echiche bụ ihe kwere omume na ọbụna iwu na ya ọbụna ma ọ bụrụ na ọ na-atụle dị ndụ onye. Lee isiokwu na ubi nke Kt). Ihe ndị a niile bara uru ọ bụghị ajụjụ bụ eziokwu. Ndị dọkịta dị iche iche na-ajụ ịnakwere nke a bụ ihe ọzọ na-egosi na ngwakọta nke ụkpụrụ na eziokwu na-apụta ọ bụghị nanị na ndị nkịtị.
Prọfesọ Yuval zara nke a na webụsaịtị gbakwunyere nzaghachi izugbe nye anyị niile. A na-ewelite nzaghachi kpọmkwem maka okwu m (yana kwa Dr. Azgad Gould). Na webụsaịtị ya Ma nke a bụ asụsụ ya:
N'ịsọpụrụ Rabbi Dr. Michael Avraham
Ụlọ ọrụ Higher Institute of Torah
Ndi nwe ezi obi, Rabbi Shalom na Bracha,
Nke mbụ, mara na ndị debanyere aha n'akwụkwọ nwere ekele dị ukwuu maka gị na ọrụ gị. Anọghị m n'ụwa Torah ruo n'ókè nke na-enye m ohere ịghọta Torah gị na ọrụ halakhic, mana neurobiology na obere nkà ihe ọmụma m ghọtara zuru m ka m nwee mmasị na akwụkwọ gị "Science of Freedom", nke m chere na ọ bụ. ọrụ echiche mbụ ma mara mma.
Tụnyere mmasị m n'akwụkwọ gị, o doro anya na nzaghachi gị na-enweghị afọ ojuju sitere na akụkọ "ha anaghị atụgharị". Ọ bụ ya mere m ji nwee obi ụtọ maka ụfọdụ ndozi m mebere onwe m ebe a, iji gbalịa ime ka ị kwenye na ezi omume nke okwu m, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ime ka ọ kwenye, mgbe ahụ ọ dịkarịa ala malite ịmepụta àkwà mmiri n'etiti ugwu gị na ugwu gị. ugwu m. Ka anyị malite n'ihe ndị m kwenyere na gị:
Ekwenyere m gị ugboro abụọ (ma ọ bụghị ugboro abụọ n'ụbọchị) gbasara Michelle Foucault. Abụọ n'ihe gbasara postmodernism, nke m kwenyere na ọ bụ ederede efu, yana gbasara mkpebi ya na nchọpụta psychiatric, nke, n'ụzọ dị mwute, ọ dị nnọọ mma. Ma m kwere, na m na-ejighị n'aka na ebe a ị na-ekweta na m, na ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụghị: ọ na-aga n'ihu na psychiatric nchoputa, site n'okike ya, na ọ gaghị enwe ike ịkwụsị uru echiche, ọ dịghị ihe ọzọ. n'ọdịnihu a na-ahụ anya. Ya mere, ihe onye ọkà ihe ọmụma nwere ike imeli - ikewapụ nkewa dị nkọ n'etiti ụkpụrụ na eziokwu, onye isi mgbaka enweghị ike imeli. Ma karịsịa ọ pụghị ịghọgbu onwe ya na ọha na eze na e nwere - ma ọ bụ nwere ike ịdị - nkewa ahụ zuru oke n'ọhịa ya. Aga m alaghachi na nke ahụ ma emechaa.
Ekwenyere m na nyocha gị dị nkọ ajụjụ banyere ọnọdụ halakhic nke nwoke ahụ dina na nlekọta ahụike mgbe uche ya kwụsịrị ma ọ gaghị arụ ọrụ ọzọ, mgbe obi ya na-akụ, na ọbụna m mụtara ihe ọhụrụ site n'ihe ndị ị dere n'isiakwụkwọ. isi okwu na nzaghachi gị. Ọzọkwa: Enwere m obi ụtọ na nkwubi okwu ikpeazụ gị - na ọ bụ iwu na inye onyinye akụkụ ahụ nwoke a - dị ka nke m. Enwere m olileanya na ị ga-aga n'ihu na-eji ohere gị na mmetụta gị n'etiti Bnei Torah gbanwee ndị na-amaghị ihe - na ọbụna ndị na-ekweghị ekwe - àgwà nke ụfọdụ ndị isi nke ultra-Orthodox na okpukpe ndị Juu na mba na okwu ahụ.
Ma ihe ị nwere ike ime banyere ọdịiche dị n'etiti "dị ndụ" na "ndị nwụrụ anwụ", ị nwere ike, n'uche nke m, na-eme banyere ọdịiche dị n'etiti "gbagọrọ agbagọ" na "adịghị agbagọ." M ga-akọwa okwu m: Nke mbụ, megidere ihe ị na-ede, dọkịta na ndị ọzọ otú e si ekpebi ma mmadụ ọ dị ndụ ma ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ. Ama m aka mbụ a. Mgbe m rụrụ ọrụ na ngalaba ụlọ ọgwụ dị ka dọkịta ọkachamara, akụkụ dị mwute nke ọrụ m bụ ịchọpụta, na ìhè mbụ, ọnwụ nke ndị ọrịa nwụrụ n'abalị. M ka na-echeta, ruo taa, ọtụtụ ihu m ji mpempe akwụkwọ kpuchie maka ọbịbịa nke onye ọrụ ụlọ, bụ́ onye bịara iburu ha na mmalite nke njem ikpeazụ ha.
Ma aghọtara m na ị bụ eziokwu mgbe ị na-ekwu na mkpebi siri ike nke onye "dị ndụ" na onye "nwụrụ anwụ" nwere ike ịdị iche na mkpebi ahụike, ọ dịghịkwa atụgharị n'agbanyeghị ya. Ma nkwubi okwu doro anya site na nzaghachi gị, na nkọwa nke uche nke mgbagha na nkọwa okpukpe (na n'ezie nkọwa mmekọrịta okpukpere chi) nke nhụsianya enweghịkwa njikọ, n'echiche m adịghị egosipụta eziokwu.
Ka anyị were kleptomania, nke ị welitere dị ka ikpe ule. Kleptomania abụghị ihe mgbagwoju anya. Bụ nsogbu uche. Edebere okwu ahụ deviation na mgbaka mmụọ, dị ka n'asụsụ okporo ụzọ, maka ihe na-adịghị mma, ọ bụghị ikwu ihe na-asọ oyi, omume na ọnọdụ mmekọahụ. Enwere m olileanya na ị naghị agbalị iji mgbakọ na mwepụ, na uru na-anọpụ iche, nkọwa nke nhụsianya site na ụkpụrụ (aka ọkọlọtọ deviation), iji mee ka nkwenye nke àgwà jọgburu onwe ya nke ultra-Orthodox Judaism kwadoro na nwoke idina nwoke.
Psychiatry na-akpakọrịta ọ bụghị nanị na "omume" kama ọ na-emetụta ihe ndị dị n'ime onwe; Dịka ị dere, ọ dịkwa m ụtọ na ebe a ị kwenyere na m, kleptomaniac agaghị ezu ohi n'ezie ka ọ bụrụ kleptomaniac, na nwoke idina nwoke ekwesịghị ịgha ụgha nye nwoke ka ọ bụrụ nwoke nwere mmasị nwoke. Ma ebe a na-akwụsị ntụnyere n'etiti ilu na ilu. kleptomaniac na-emerụ ma na-emerụ ndị ọzọ na omume ya, ya mere omume ya adịghị mma (ọ bụghị nke na-ezighị ezi), a na-ahapụkwa ọha mmadụ iji chebe ya. Ọzọkwa: ọ bụrụ na ọ na-ezu ohi ihe bara uru, ọrịa uche ya nwere ike ọ gaghị ebili n'ihu ya n'ụlọ ikpe, a ga-eburukwa ya n'uche naanị n'oge arụmụka ikpe. Echere m na mụ na gị na-ekweta na ndị na-edina ụdị onwe abụghị ndị omempụ, ma ọ bụrụ na ha adịghị agha ụgha nye nwoke - ọ bụghị ihe doro m anya otú ha si dị iche na ndị Juu ndị ọzọ niile, bụ ndị na-eche ihu ihe mgbochi nke Torah na-egosipụta mmekọahụ ha.
M laghachi na okwu nke enweghị ike kpamkpam ikewa ụkpụrụ si eziokwu na eziokwu na psychiatry. Onye Kraịst Katọlik ji obi ya niile kweta na achịcha udo ọ natara ma rie n’oge Mass ghọrọ n’ọnụ ya bụ ezi anụ ahụ nke Mesaịa. Ọ bụ echiche ụgha maka ebumnuche na ebumnuche niile, ọ na-apụkwa na nkọwa nke psychosis n'ihi ụkpụrụ mmekọrịta ọha na eze na uru - ọtụtụ narị nde mmadụ kwenyere na ya. Nke a bụ ihe atụ na-enweghị isi, mana psychiatry, ma a bịa n'ịkọwapụta, nyocha na ịgwọ ihe ndị dị n'ime onwe, na-agbanye n'ọchịchịrị banyere ihe ndabere nke ndu-nke bụ eziokwu maka ihe ndị a.
M ga-enwe obi ụtọ na m nwere ike tinye ọrụ m n'otu ebe nke physics na-eguzo na ya, ma ọ gaghị eme n'oge ndụ m, na ọ dịghị mgbe. Dị ka ị maara nke ọma n'aka m, ajụjụ nkà ihe ọmụma bụ isi nke na-adabere n'okwu a, nke m chere na ọ nweghị azịza na-eju afọ ugbu a, bụ ajụjụ nke psychophysical causality: ọ bụ otu ụzọ ma ọ bụ ụzọ abụọ ma ọ bụ na ọ dịghị emetụta okwu ahụ na niile? Nna nna m onye ị kwuru meso, dị ka gị, na ajụjụ nke psychophysical causality, na ọbụna kwere na ọ dịghị na ike ịbụ ihe ngwọta ya (Ignorbimus - anyị amaghị na anyị agaghị ama). N'emeghị ka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-agbalị ịbanye n'ime ebe a, m na-akwado echiche nke nwa akwụkwọ ya, Prof. Yosef Neumann, bụ onye chere na taa ọ nweghị ngwọta ọ bụla, ma echi ọ ga-ekwe omume (Ignoramus - anyị amaghị, mana anyị nwere ike mara otu ụbọchị).
N'ikpeazụ, achọrọ m ịlaghachi n'ebe dị elu nke nkà ihe ọmụma gaa n'ụwa gbara ọchịchịrị nke ndị na-edina ụdị onwe okpukpe. Edere m akụkọ m na-eso okwu onye ọrụ ibe gị Rabbi Levinstein, onye chụpụrụ ndị ezi omume a ma wute ha. Na njedebe nke ụbọchị ajụjụ bara uru nke na-amasị m, na nke m na-achọtaghị ntụaka kpọmkwem na nke dị mkpa na nzaghachi gị (na m na-atụ anya maka ntụaka dị otú ahụ), bụ ma ọ nwere ụzọ isi mee ka ndị na-edina ụdị onwe dị ndụ na okpukpe. malite ezinaụlọ n'ime obodo okpukperechi Zayọn. Ozugbo ọ na-abịakwute ndị na-adịghị agha ụgha nye nwoke, nke a bụ n'echiche dị umeala n'obi m ajụjụ gbasara ọha mmadụ karịa ka ọ bụ halakhic. N'ebe a, n'echiche nke m, gị, mụ, na ndị niile na-agụ akwụkwọ anyị kwesịrị icheta okwu onye ọrụ ibe gị Albert Einstein: "Ọ dị mfe ịgbawa ihe na-adịghị mma karịa ịgbawa ajọ mbunobi."
Lee mmeghachi omume m ebe a maka okwu ya:
Ezigbo Prof. Yuval, ndewo.
Nke mbụ na nsọpụrụ m, ị nwere mmasị na ọnụọgụ m ma gosipụta ekele gị ebe a. O doro anya na ọ dịghịrị m mfe.
N’ezie, ekwetaghị m n’ihe i kwuru n’isiokwu ahụ, n’agbanyeghị na enweghị m ike ịsị na ọ dịghị amasị m. Dị ka ọ dị na mbụ, a na-ede ihe nke ọma na n'ụzọ doro anya ma mara mma. Ma, dị ka e kwuru, ọbụna mgbe "ọnụ nke mmezi" (dị ka ị na-etinye ya), anaghị m ekweta na ha, m ga-agbalị ịkọwa ebe a mere.
Ọ bụrụ na anyị kwenyere na Foucault (M na-ekwu isi ihe nke abụọ), mgbe ahụ, anyị abịala na nkwubi okwu mbụ bụ na psychiatry jupụtara na echiche bara uru ma dabere na ha. Ọ nwekwara akụkụ bụ eziokwu, ma akara ala ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-agụnye ajụjụ bara uru na omenala.
Site n'eziokwu na ị kwenyere na nke a bụ ikpe, ahụghị m ka ị na-ekwu na mmekọrịta dị n'etiti onye rabaị na onye isi mgbaka bụ ihe atụ nke mmekọrịta dị n'etiti ọkachamara na onye rabaị. Ọbụna ma ọ bụrụ na psychiatry adịghị ahụ ya dị ka a deviation, ị ka na-ekweta na ọ bụ uru atụmatụ. Ya mere, gịnị mere rabbi kwesịrị iji nabata nke a dị ka mkpebi siri ike ọkachamara? Ọ nwere ike ikpebi na ọ ga-enweta ya, mana ọ bụ mkpebi ya halak na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ikike ndị ọkachamara. Banyere ihe nlereanya nke rabaị megide onye ọkachamara, ị kpọtụrụ m aha na nzaghachi mbụ m N'akụkọ ahụ m tinyere n'okwu ahụ N'ehihie m.
Mgbe ahụ ị gbakwụnyere na ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere (na psychiatry ga-agwakọta ụkpụrụ na eziokwu). Ọ bụ ezie na abụghị m ọkachamara, m ka ga-asị na ekwenyeghị m na ya. Gbazie m ma ọ bụrụ na m na-ezighị ezi, mana psychiatry nwere ike ilekwasị anya na eziokwu (n'echiche sara mbara, ya bụ gụnyere echiche ndị na-akọwa ha, dị ka na nkà mmụta sayensị), na ọ dịghị ihe ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike inwe afọ ojuju mgbe niile ihe sitere na nwoke idina nwoke (maka m nke a na-agụnye ịkọ nkọ anụ ọhịa psychoanalytic dị ka ịchọrọ, ọ bụrụhaala na ndị a bụ echiche ndị na-agbalị ịkọwapụta ihe ahụ n'onwe ya n'enweghị ụgwọ bara uru), otú ọ dị. amalite (ibid.), Ebe ọ bụ juru ebe nile, ma na otú Nke a nwere ike ịgbanwe, na ihe bụ price nke ọ bụla ụdị mgbanwe (ma ọ bụ "ntụgharị" bụghị na anyị) dị otú ahụ na ndị dị otú ahụ. Ndị a bụ ajụjụ ndị metụtara eziokwu na nkọwa ha, yabụ ajụjụ sayensị na ọkachamara ziri ezi. Ọ dị m ka a naghị ebo ajụjụ ndị a niile ụgwọ ọnụ ahịa ọ bụla. N'aka nke ọzọ, a ga-ahapụrịrị ajụjụ maka ma ọ bụ ngbanwe ma ọ bụ na ọ bụghị, ọha mmadụ na onye ọ bụla nọ n'ime ya ka ha chọpụta.
N'ezie ọ bụrụ na ị na-eme ka echiche nke "deviation" m eziokwu, dị ka a deviation si statistical norm ("neutral mathematical definition", n'asụsụ gị) mgbe ahụ psychiatry nwere ike ikpebi nke a ọkachamara, ma ị kwenyelarị na okwu gị ebe a na. nke a abụghị ikpe. N'aka nke ọzọ, ị lọghachite ebe a ma mezie uru m bara na okwu deviation, echere m na ime otú ahụ, ị ​​na-agbalị ọzọ ịkọwa nkọwa nke uche maka iji ya eme ihe kwa ụbọchị. N'ihe a na-ejikarị eme ihe na mpaghara anyị dị iche iche bụ ihe siri ike (nke e bu pụta ụwa?) Ọchịchọ maka ime mpụ (dị ka ihe atụ nke kleptomania anyị kwekọrịtara, ewezuga okwu ahụ bụ "deviation"). Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, nke a bụ nkọwa, nke mere Rabbi Levinstein na obere onwe m (onye dị anya na echiche ya n'ọtụtụ ihe) kwetara na ọ dịghị ohere ịnweta ikike ọkachamara na ya. Gịnị bụ ihe ọdịnaya nke echiche, na ọ na-agụnye nwoke idina nwoke, M n'onwe m na-eche na ọ bụghị (n'ihi na n'uche nke m deviation bụ a ọchịchọ nke omume rụrụ arụ, na ọ bụghị a ọchịchọ mpụ omume na okpukpe uche). M na-eche na Rabbi Levinstein si ele bụ ee (n'ihi na n'echiche ya a ọchịchọ nke mpụ omume n'echiche okpukpe bụkwa a deviation, eleghị anya n'ihi na ọ na-amata halakhah na omume ọma, nke m ike jụrụ na si otú sonye n'oge tangle).
N'okpuru ala, ahụghị m ihe kpatara na ụwa maka American Psychiatric Association ma ọ bụ ndị ọkachamara ọ bụla ọzọ iji chọpụta maka anyị niile ihe ekwesịrị ịgwọta na ihe na-ekwesịghị, na ihe bụ ntụgharị na ihe ekwesịghị. Ekwesịrị ịhapụ nke a na ọha mmadụ, onye ọ bụla maka onwe ya, yana kwa onye dibia bekee nke onwe ya (na-emegide mkpakọrịta ọkachamara ha). Nke ahụ bụ: ọha mmadụ ga-ekpebi ma ọ bụrụ na e nwere ihe na-emerụ ndị ọzọ (kleptomania, pedophilia, wdg), mgbe ahụ, a ga-agwọ ya ọbụna ma ọ bụrụ na onye ọrịa ahụ ekwupụtaghị ọchịchọ maka ya (n'ọnọdụ dị oke njọ). N'ọnọdụ ebe enweghị nsogbu ọha na eze, onye ahụ n'onwe ya ga-ekpebi ma ọ chọrọ / chọrọ ọgwụgwọ ma ọ bụ na ọ chọghị. Na n'ezie onye isi mgbaka ọ na-atụgharị na (ọ bụghị òtù) nwere ike ịsị na ọ chọghị ịgwọ okwu a n'ihi ụkpụrụ nke ya. N'ọnọdụ ọ bụla, ahụghị m ohere maka mkpebi mkpokọta nke otu ọkachamara n'okwu ndị dị otú ahụ.
Echere m na foto a na-akọwakwa ihe mere n'echiche m bụ nke ọma na ọ bụ ụzọ mgbapụ site na iwebata akụkụ bara uru n'ime psychiatry. N'ihe kachasị mma nke nghọta m na ihe nlereanya a, anyị na-ezere nke a, ya mere, n'echiche m, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ nwere ike ime ka ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ na eziokwu, dị ka ọkà mmụta sayensị ma ọ bụ ọkà ihe ọmụma. Ebe ọ bụ na abụghị m ọkachamara, enweghị m obi abụọ ọ bụla na e nwere ike imehie ihe n'okwu ndị a, m ga-enwekwa obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị ga-agbazi m.
Otú ahụ ka ọ dịkwa n’ọnọdụ mmadụ dina ná nlekọta kpụ ọkụ n’ọnụ mgbe obi na-akụ ya ihe, uche ya akwụsịkwa ịrụ ọrụ. Ndị mmegide n'uche m, ndị n'anya m na-ezighị ezi na ndị na-emerụ ahụ, abụghị "amaghị ihe," dị ka i si tinye ya. A sị ka e kwuwe, ndị a abụghị eziokwu ma ọ bụ ihe ọmụma nke ụdị ọ bụla, ya mere m na-emegide iji okwu a gbasara ha. N'uche m, ha na-ezighị ezi n'omume, ya mere ha na-emerụ ahụ. Ọzọ, ọ dị ezigbo mkpa ka m kpachara anya maka ịmata ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ na eziokwu. Kpọmkwem n'ihi nke a dọkịta enweghị uru ọ bụla gbasara ajụjụ a.
Eziokwu ahụ ị kwuru n'okwu gị ebe a na n'omume a na-enyefe ndị dọkịta okwu a abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị naanị ndị nnọchi anya ikike, ọ nweghịkwa ihe ọzọ. Nke a abụghị mkpebi ọkachamara. Agwakọtala ụkpụrụ na eziokwu ọzọ. N'ezie nyefee ndị dọkịta mkpebi ikpebi ọnwụ (dị ka ị kọwara banyere onwe gị na okpu gị dị ka dọkịta), ma nke ahụ apụtaghị na ọ bụ eziokwu-ọkachamara mkpebi. A na-eme nke a maka ịdị mma na ịrụ ọrụ naanị, na n'ezie ọ na-enyefe ikike nke ndị omebe iwu na dọkịta naanị iji mee ka ọ dị mkpụmkpụ na ịhazi usoro ahụ. Kpebie ọnwụ, n'agbanyeghị na ọ bụ mkpebi bara uru). Ịkpebi ọrụ onye ahụ nwere n'ọnọdụ dị otú ahụ na ihe ohere ya nwere ịlaghachi ndụ bụ mkpebi ọkachamara. Mkpebi ma n'ọnọdụ dị otú ahụ a na-ewere ya dị ka onye nwụrụ anwụ - bụ mkpebi bara uru dị ọcha. O nweghị ihe jikọrọ ya na nke bụ eziokwu. N'adịghị ka ihe ị dere, mkpebi halakhic banyere ndụ na ọnwụ adịghị "dị iche na mkpebi ahụike." Ostrich na ọ dịghị ihe dị ka "mkpebi ọgwụ" gbasara ndụ ma ọ bụ ọnwụ. Nke a bụ mkpebi bara uru dị ọcha (dị ka akọwara n'elu). Ọ bụ eziokwu n'ezie na mkpebi ikpe nwere ike ịdị iche na nke halakhic, ebe ọ bụ na abụọ ndị a dị iche n'ụdị ụkpụrụ iwu (kama ịbụ eziokwu).
Anyị kwenyere n'ụzọ zuru ezu na ndị na-edina ụdị onwe abụghị ndị omempụ. Ma anyị ekwenyeghị n'ezie na ndị na-edina ụdị onwe (ndị na-egosipụtakarị ọchịchọ ha) abụghị ndị omempụ. Anyị kwenyere na omume ha abụghị mpụ, ya bụ, mmejọ omume (m kwuru na e nwere ndị nọ n'ogige okpukpe na-eche echiche dị iche, abụghị m otu n'ime ha), ebe ọ bụ na ha adịghị emerụ ndị ọzọ. Ma halakhic na Torah bụ ndị omempụ, ya mere site n'echiche okpukpe na nke halak ha bụ ndị omempụ n'otu echiche nke onye na-egbu ọchụ ma ọ bụ onye na-apụnara mmadụ ihe (ma ha bụkwa ndị omempụ omume). Ogo ikpe ọmụma bụ ihe ọzọ n'ezie. Nke a bụ ebe ogo nhọrọ na njikwa ha na-abata na ogo mmata na nke a bụ ihe mgbochi (onye na-ahụ maka ụwa anaghị ewere nke a dị ka iwu na-akwadoghị). Dị ka kleptomaniac n'ihu onye ohi oge niile.
Ọ dị m mkpa iburu n'uche na n'ihe gbasara omume ndị na-edina ụdị onwe m na-enwekarị nnwere onwe karịa ka ị tụrụ anya ka m bụrụ. Maka mụ onwe m, ọbụna ndị na-aghọta okwu ahụ nwere ikike ịme mmeso mmadụ nkịtị n'ime obodo (ọ gwụla ma ọ na-efegharị ya ma kwusaa ozi ọma ya, nke bụ okwuchukwu maka ịpụnarị iwu dị ka iwu siri dị). Onye bụ onye omekome n’ebe onwe ya na nke onwe ya bụ onye ezi omume n’obodo, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọ nọ n’ọnọdụ siri ike. Edere m nke a ọtụtụ ugboro n'oge gara aga, ma nweere onwe gị ịhụ dịka ọmụmaatụ Ebe a na kwa Ebe a. Ị nọ na-eche ihe mere na ihe na-apụtaghị na nzaghachi m na akwụkwọ akụkọ, nke a bụ n'ihi na m kwuru n'ebe ahụ nanị na arụmụka ị welitere n'isiokwu gị, ọ bụghị n'isi nke okwu. Ọ bụrụ na ị hụ mmalite nke nzaghachi ogologo oge m na kọlụm nke gara aga Saịtị m, ị ga-ahụ na edeela m nke ọma na m kwenyere n'ọtụtụ nkwubi okwu gị bara uru. O di nwute na usoro ekweghị ka m gbasaa nzaghachi na akwụkwọ akụkọ. Ọ bụ ya mere m ji mee "ụfọdụ mmezi" na ogidi abụọ ikpeazụ ebe a na saịtị na mkparịta ụka sochiri (na okwu azụ azụ).
Aga m ejedebe na mimara nke i hotara dị ka "onye ọrụ ibe m", dịka i si tinye ya (ọ na-eme m ihere ịkpọ aha m n'otu oge na nnukwu ọkà mmụta sayensị). O siri ike n'ezie ịgbanwe ma ọ bụ kpawa ajọ mbunobi. Ma nnukwu ajụjụ bụ ma n'okwu Didan nke a bụ n'ezie ajọ mbunobi, ma ọ bụ na ọ bụ ọnọdụ bara uru dị iche (ọnọdụ ọ bụla bara uru, gụnyere nke gị na nke m, bụ ajọ mbunobi n'echiche). Omume taboo na mmekọrịta ọha na eze na okpukpe okpukpe maka nwoke idina nwoke (nke n'echiche m enweghị ihe jikọrọ ya na mmachibido iwu ahụ, ebe ọ bụ na mmachibido iwu na nka na Shabbat adịghị obere ma ghara ịnata ọgwụgwọ dị otú ahụ) bụ n'ezie ajọ mbunobi n'uche m (n'ihi na n'echiche m enweghị ihe jikọrọ ya na mmachibido iwu na Shabbat). A na-eme echiche ziri ezi, ọ bụghị naanị ụkpụrụ). Mana echiche nke nwoke idina nwoke dị ka mmachibido iwu abụghị ajọ mbunobi kama ọ bụ ụkpụrụ halakhic (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dị nwute n'uche m). Àgwà nke ụkpụrụ ndị dị otú ahụ (dị ka ụkpụrụ ọ bụla) n'ezie na-adabere na nkwenkwe nke onye ọ bụla n'ime anyị. Mụ onwe m nwere okwukwe na onye na-enye Torah, na ọ bụrụ na ọ machibidoro na ọ nwere ike inwe nsogbu na ya (nke na ịda ogbenye m na-enweghị m ịhụ). M na-atụgharị uche m n'iwu ya. Ma ebe ọ bụ na ndị a bụ ajụjụ nke okwukwe, m ga-achọghị psychiatry were ọnọdụ, na-emekwa bụghị mkpebi siri ike, banyere ha (dị nnọọ ka ihe na-eme udo n'ọnụ anyị Catholic cousins), na ebe a anyị na-ọzọ azụ na enwere ike yana mkpa ịkwụsị psychiatry na usoro. Ma banyere nke a, ndị rabaị anyị ekwuworị (ibid., Ibid.): Nye Siza ihe nye Siza…
 Ekwesịrị m ikwu na ya na akụkọ abụọ nke Yoav Sorek, nke e bipụtara n'otu mgbakwunye ahụ izu abụọ gara aga na nke e bipụtara na weebụsaịtị mgbakwunye Shabbat (p. Lee), nke a bụ mkparịta ụka kachasị ọgụgụ isi na nke dabara adaba mara. m na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe niile na isiokwu a. Na nsọpụrụ m isonye na ya.
Na Ngbanwe, Ọkachamara na Uru - Azịza nye akụkọ Prọfesọ Yoram Yuval, "Ha Anaghị Agbanwe Agbanwe", Shabbat P. P. Akev Mgbakwunye (Column 25)
'Hefza' nke Torah - nzaghachi nye akụkọ Rabbi Yehuda Rak
Halacha na eziokwu - gịnị bụ ọkachamara halakhic
→ Ozi gara aga
Bipute na-esote ←
8 Echiche na "Na Deviation, ọkachamara na ụkpụrụ - Azịza nke akwụkwọ Prof. Yoram Yuval," Ha adịghị atụgharị ", Shabbat Supplement P. Akev - Na-aga n'ihu na kọlụm (Column 26)"
Editor na Chief
30 Tishri 10 - 2016/12/31 na XNUMX:XNUMX
Nke mbụ, m ga-achọ ịkọwapụta na enwere m mmasị na akwụkwọ ozi na okwu ahụ, omimi ya na ọbụna nkwubi okwu nke unu abụọ kwenyere na ụkpụrụ.
Agbanyeghị, echeghị m na aghọtara m ihe kpatara ị na-ekwusi ike na ịkọwa nhụsianya dị ka ọchịchọ ime mpụ na ọ bụghị naanị iche site na ụkpụrụ? Ogo nke ngbanwe site na ụkpụrụ nke chọrọ enyemaka ma ọ bụ ọgwụgwọ bara uru n'ezie, mana ngbanwe site na nke nkịtị bụ ihe ziri ezi.
A na m arịọ mgbaghara maka iweghachite Foucault n'okwu ahụ, mana na ara ara nke Age of Reason, Foucault kwuru kpọmkwem nke ahụ na aghọtara m na anyị ga-erute otu nkwubi okwu na otu isiokwu nke ịmata ọdịiche dị n'etiti eziokwu (ngbanwe site na usoro nkịtị) na ụkpụrụ (anyị niile na-atụgharị ma ọ bụ katalọgụ bara uru)
Ndewo onye mmegide.
Enweghị ihe mgbochi iji kọwaa nhụsianya n'ụzọ dị otú a. Nkọwa bụ okwu maka gị. Mana echere m na nke a abụghị nkọwa anabatara ma ọ bụghị ihe Rabbi Levinstein bu n'obi na nke anyị na-atụle ebe a. Ya mere, anyị (Yoram Yuval na m) kwetara ka anyị ghara ịkọwa ya na mgbakọ na mwepụ na n'ụzọ na-anọpụ iche. N'iji ụbọchị ọ bụla "deviation" bụ nkebiokwu nwere nkọwa ọjọọ doro anya. Dị ka aro gị si kwuo, Rabbi Levinstein kwuru naanị ihe na-abaghị uru na ihe na-abaghị uru, yabụ kedu ihe kpatara ị ga-eji kparịta ya?! Enweghị esemokwu na nwoke idina nwoke n'ezie na-akọwapụta ntakịrị n'ime ndị mmadụ. Arụmụka ahụ (ya na Rabbi Levinstein) bụ maka ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị maka ya (ebe a kwa Yuval na mụ na-ekwenye, belụsọ maka okwu okwu na mkpa nke ikike ọkachamara maka mkparịta ụka). Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, arụmụka niile ebe a dị na ụgbọ elu bara uru ma ọ bụghị nke eziokwu-mgbakọ na mwepụ.
Aghọtaghị m okwu gị na Foucault. A sị ka e kwuwe, anyị onwe anyị alaghachila Foucault na okwu ahụ (mgbe kwekọrịtara na àgwà ọjọọ na-adịghị mma n'ozuzu ya), n'ihi na ebe a ọ bụ n'ezie ezi (elekere guzoro, wdg). Anyị abụọ kwenyere na nkwupụta Foucault (n'akwụkwọ ị kpọtụrụ aha) na nchọpụta mgbaka na-adabere na uru na echiche omenala. Ma echere m na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere onye isi mgbaka enweghị ike iyi okpu ọkachamara ya na arụmụka ebe a (ebe ọ bụ na ndị a bụ ụkpụrụ na ọ bụghị eziokwu).
Nke a (na naanị nke a) bụ arụmụka dị n'etiti anyị ugbu a. Arụmụka yiri nke ahụ bụ maka mkpa ndị ọkachamara dibịa nwere gbasara ikpebi oge ọnwụ. Ma nke a bụ otu arụmụka n'onwe ya.
Nsogbu omume na mmachibido iwu niile nke mmekọ nwoke na nwanyị, bụ na ọ bụghị naanị na onye ahụ na-emehie onwe ya ma na-enyere aka ma na-ewusi onye òtù ọlụlụ ya ike na mmejọ ahụ.
Mgbe mmekọrịta a machibidoro iwu na-institutionalized na-ahụ anya na ọtụtụ ndị na-enweghị ihere - mgbe ahụ akụkụ nke ihe atụ na-adịghị mma na-agbakwunyere ọtụtụ na nkwupụta ọha na eze na nke a na-ekwe, nkwupụta nke nwere mmetụta na-ebibi ihe na ụmụ nwoke ndị ka nọ n'ọnọdụ. obi abụọ, na ihe atụ na-adịghị mma nwere ike ịkpasu mmachibido iwu ahụ.
Ndị Izrel niile jikọtara ọnụ, na omume nke onye ahụ nwere mmetụta maka ọchịchị ahụ dum. Ka anyị niile nwee ihe ùgwù ịbụ ndị e doro nsọ na imeziwanye otu otu n'ime ihe ọ chọrọ imeziwanye, ma si otú ahụ na-achị ụwa dum n'aka nri.
Daalụ, S.C. Levinger
Site n'ime nke a, ị gbanweela mmachi ọ bụla n'ụdị ọ bụla ka ọ bụrụ mmejọ omume. A sị ka e kwuwe, dị ka ilu nke oghere dị n'ụgbọ mmiri si kwuo, ọbụna mmejọ ndị na-adịghị emetụta onye ọzọ na-emetụta ọdịnihu ya. Ya mere, dị ka nke a niile Torah bụ omume.
Ọ bụrụ na ị kọwaghị na mmachibido iwu n'onwe ya bụ omume, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya ikwu banyere ya bụ omume n'ihi akụkụ nke ọdịda na mmebi ya. Nke a bụ tautology agbụrụ.
30 Tishri 10 - 2016/12/34 na XNUMX:XNUMX
Na SD XNUMX Elul XNUMX
Nye Rabbi Avraham Neru - ndewo,
N’ezie, mmebi iwu nile nke uche Chineke bụ omume rụrụ arụ, anyị ji ya n’ihi nsọpụrụ nke Onye Okike, ma site n’ịbụ ‘onye nwe ụlọ’ n’ụwa, na site n’ekele maka amara ya nile n’ebe anyị nọ.
N'otu oge ahụ, ọtụtụ mmachibido iwu idina nwoke, nke na-ebuli anyị elu iji wuo ndụ ezinụlọ dị mma, na-achịkwa ọ bụghị nanị site na mmuo, kama site n'ụkpụrụ ịhụnanya, iguzosi ike n'ihe na obiọma, nke nna na nne na-erite uru na ibe ha ma na-akụ ihe na-adịghị agwụ agwụ. ihunanya na nraranye.
Mana ewezuga nsọpụrụ nke Onye Okike, enwerekwa ọrụ nkwanye ugwu n'ebe nne na nna nọ. Olee otú obi nkoropụ na-esi n'ebe nne na nna nọ mgbe nwa ha dabara na ndụ nke ihe niile bụ ihe mgbochi siri ike, ndụ nke na-enweghị ohere nke ịmepụta 'Ọgbọ Agọziri agọzi' nke ga-aga n'ihu n'ụzọ nke okpukpe ndị Juu?
Onye maara ego ole nne na nna ya tinyere na ya na ego ole ha nyere ndụ ha iji webata ya n'ụwa ka ọ zụọ ya na ịkụziri ya ihe - ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eme mgbalị ọ bụla iji isi n'ebe ọ daa pụta.
Dị nnọọ ka ndị nne na nna na-enwekarị ọgwụgwọ siri ike, ma n'anụ ahụ ma n'uche, ka ha nwee ihe ùgwù nke ịmakụ nwatakịrị, ma ọ bụrụ na ha emeghị nke ọma na ọgwụgwọ a, gbalịa ọgwụgwọ ọzọ, ma ghara ịda mbà - ugbu a ọ dịịrị nwa. onye nwere otu ego iji tinye ego na nne na nna ya. Nke a bụ opekempe ọ ga-akwụghachi ha maka ihu ọma ha niile n'ebe ọ nọ.
Ọbụna ndị na-agwọ ọrịa na-ejighị n'aka na onye ọ bụla nwere ike ịgbanwe, na-ekwu na e nwere ihe ịga nke ọma. Ọbụna mgbe ọchịchọ idina ụdị onwe dị ike ma dị iche iche, nke bụ mgbe ahụ siri ike ịgbanwe - na-ekwu Dr. Zvi Mozes (n'akwụkwọ ya, 'B Treatment of Reversal Tendencies psychologically irè', na 'Root' website), na ndị mmadụ dị nnọọ ukwuu. kpebisiri ike ma nwee okwukwe siri ike, nwere ike ịmalite ezinụlọ, site n'enyemaka nke nlekọta ọkachamara kwesịrị ekwesị.
Nkuchi na nkuchi, e wezụga na ọ naghị edozi nsogbu nke mmachibido iwu, gụnyere iru újú maka ndị nne na nna bụ́ ndị e si na ha wepụta nwa ahụ. Ịbawanye ọchịchọ nke nkuchi maka ndị di na nwunye ga-eduga n'usoro ọrụ ọdịmma iji mee ka 'ọkwa ahụ' mụbaa site n'ijibiga ihe ókè kama ịgbalị ịhapụ nwa ahụ n'aka nne na nna ya.
Nakwa ka 'ịkwado ụlọ' bụ nrigbu nke oke nhụsianya nke ezinụlọ. Ọ dịghị nwanyị nwere ezi uche ga-agafe nhụjuanya nke afọ ime na ịmụ nwa, nke mere na a ga-enye nwatakịrị onye ọbịbịa, ma kama ọ nọ n'oké nsogbu ego ma ọ bụ nke uche, na onye maara ma ọ bụrụ na òtù ndị omempụ na ndị ọchịchị rụrụ arụ adịghị etinye aka?
Dịka m dere, ihe a niile nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụ arụmụka na-adịghị mkpa na mkparịta ụka ahụ. Ajụjụ bụ ihe bụ ọdịdị nke mmachibido iwu onwe ha, na ọ bụghị ma e nwere ancillary omume akụkụ.
E wezụga nke ahụ, ụfọdụ ndetu n'ahụ ihe:
Ọ bụ Onye Okike kere mmadụ na ọchịchọ ya. Ejighị m n'aka na m na-ahụ ọrụ omume dịịrị mmadụ ịgbanwe nke ahụ.
2. Obi nkoropụ nne na nna nwere ike ịdị, mana enwere ike ịnwe ebe ọ na-adịghị. Gịnịzi? Azla ọrụ omume ya? E wezụga nke ahụ, ọ bụ ezie na enyochabeghị m mana echere m na e nwere ndị di na nwunye na-azụ ụmụ na-eche nche n'ili. Echere m na "o nweghị ohere" bụ nkebiokwu siri ike.
3. Mmadụ “adaghị” kama “ejidere ya”.
4. Arụmụka ndị a niile na-ekwu maka ọrụ ịgbanwe (ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume), mana anaghị arụtụ aka na nsogbu omume na omume ahụ.
5. Mmadụ agaghị agbanwe ndụ ya n’ihi na ọ na-ewute nne na nna ya. A maara site na Riki nke e hotara na Rama Yod na nwa nwoke ekwesịghị irubere ndị mụrụ ya isi n'ịhọrọ onye ọlụlụ, agbasakwara m nke a n'isiokwu m banyere ịsọpụrụ ndị nne na nna.
6. Enwere ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa na-akọ na ọdịda na mmebi dị egwu. Abanyeghị m n'ajụjụ ma ọgwụgwọ ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ, mana ị kọwara ọnọdụ ahụ n'ụzọ dị oke rosy. Ihe a chọrọ ka mmadụ mee ihe ize ndụ dị otú ahụ kwesịrị ịdị na ntọala siri ike. Ma ọzọ, n'ọkwa okpukpere chi e nwere n'ezie ihe a chọrọ, ma ịhụ ya dị ka ọrụ omume m na-enwe obi abụọ. Ọ dịghị ekele na-amanye mmadụ ịbanye n'ime ụdị nhụjuanya dị egwu na ihe egwu nke uche. Na ndị nne na nna ga-abanye na ọgwụgwọ ntụgharị nke ga-agbanwe obi ha ma wepụ obi nkoropụ, ọ dị mfe karị ma bụrụ ihe a na-achọsi ike (omume, ọ bụghị halakhic).
7. Okwu ikpeazụ bụ nkọwa nke otu akụkụ na nke enweghị isi (na m na-eji asụsụ dị nro). O doro anya na ọ bụrụ na emegideghị gị n'ezie na ọnọdụ a ị gaghị ahụ ya otú ahụ. Ịwa nwa bụ nkwekọrịta n'etiti ndị agadi. Na ihe ọ bụla nwere ike isi na ya pụta, mmadụ kwesịrị ịgbalịsi ike ma gbochie ya. Ọ naghị egbu oge n'onwe ya. Inye ọrụ ebere nwekwara ike ime ka ndị mmadụ ghara inwe ego, ha nwekwara ike izu ohi. Ekwuru na Yigal Amir nwere nkwenkwe okpukpe nke nwere ike bute igbu mmadụ na imebiga ihe ókè. Nke a ọ̀ bụ ya mere e kwesịrị iji hapụ okwukwe okpukpe?
Dị ka a na-achị, mgbe ị na-ebuli ụdị arụmụka ọ bụla na n'ihi ihe ụfọdụ onye ọ bụla ruo n'ókè ikpeazụ n'otu ntụziaka ahụ, m ga-enyo enyo ma nyochaa ikpe m ọzọ.
Na-abanyeghị na nkọwa zuru ezu nke isi ihe niile ị welitere - M ga-ekwu naanị otu okwu banyere ihe ize ndụ ndị a tụlere na ọgwụgwọ ntụgharị.
Nke mbụ, ekwesịrị ịghọta na ọ bụghị ọgwụgwọ niile a na-enye kwesịrị ekwesị, ma enwere ọgwụgwọ ndị nwere ike ịdị mma maka mmadụ ma nwee ike ibibi onye ọzọ, dịka ọgwụ, ebe ihe na-enyere mmadụ aka nwere ike iduga ibe ya n'ọnụ ụzọ ọnwụ. ya mere, dị ka na nkà mmụta ọgwụ, ihe niile kwesịrị ime site ọzọ ọkachamara ọkà n'akparamàgwà mmadụ nchoputa kpachara anya na mgbanwe nke ọdịdị nke ọgwụgwọ na onye.
Na nke abuo, otu onye kwesịrị ịma na sayensị bụ nnọọ groping na ọchịchịrị mgbe ọ na-abịa dum nke nwoke idina nwoke (n'agbanyeghị, a nnukwu akụkụ nke ọchịchịrị bụ afọ ofufo, maara nke ọma igbochi ọ bụla mgbalị ịchọta ụzọ, n'ihi na Ahụmahụ n'onwe ya bụ ịjụ okwukwe maka ịkwado njirimara nwoke idina nwoke).
Otu n'ime ihe ize ndụ ndị bụ isi a na-ekwu na mgbalị ịgwọ ọrịa bụ egwu nke obi nkoropụ zuru oke n'ihi ọdịda nke mgbalị ọgwụgwọ ahụ. Otú ọ dị, mgbe ị mara n'ihu na ndị a bụ ọgwụgwọ ọhụrụ na nnwale - ọkwa nke atụmanya dị oke oke, ya mere ndakpọ olileanya nke ọdịda adịghị ada onye ahụ. Ma ghọta na ihe na-agabeghị ugbu a n'ụzọ dị otú a, nwere ike ịga nke ọma echi n'ụzọ dịtụ iche, 'ma ọ bụrụ na ọ bụghị echi, mgbe echi' 🙂
N'otu aka ahụ, anyị ga-amalite site na mmalite nke nkwenye na Chineke etinyela nnukwu ihe ịma aka n'ahụ mmadụ ịchọta ọgwụgwọ maka ọchịchọ a nke megidere Torah. N'aka nke ọzọ, ebe anyị maara na ụzọ dị n'ihu dị ogologo ma anyị achọtabeghị ngwọta doro anya.
Nke a bụ ihe gbasara nsogbu niile nke mmadụ, mgbe ị na-agbalị ịchọta ọgwụgwọ - nke dị elu. Mgbe ụfọdụ ọtụtụ iri afọ na-agafe, mgbe ụfọdụ ọtụtụ narị, na ọbụna karịa, ma enwela obi nkoropụ na ogologo na-aga n'ihu na-achọ n'ebe ọ bụla kwere omume ntụziaka, ruo mgbe mberede a itunanya-abịa.
Nke mbụ, ndị a bụ akụkọ sitere n'aka ndị ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ.
Nke abụọ, ọ bụrụhaala na ha achọtaghị ọgwụgwọ na ihe niile dị na igwe ojii dị ka ị na-ekwu, gịnị ka ị na-atụ anya n'aka nwoke ahụ? Ịbụ omume na ịghara ịbụ nwoke nwere mmasị nwoke na-enweghị ọgwụgwọ dị irè?
Ihe a ga-eme?
A. Chọọ ihe ngwọta.
Ndị ọkachamara na-ahụ maka ndụmọdụ na ịgụ akwụkwọ ndị ọkachamara, nwere ike ime ka mmadụ ghọtakwuo àgwà ya na ihe kpatara nsogbu ya, nke ọ nwere ike ịchọta ngwọta ọhụrụ n'onwe ya, ikekwe ọbụna ntụziaka ndị ọkachamara na-echeghị echiche.
B. Mee ka ihe isi ike ahụ bụrụ ihe ịma aka.
Dịka ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ ịnwa ịgbawa okwu na-edoghị anya na Gemara ma ọ bụ na 'Edges'. N'ebe a, nwoke ahụ nwetara ihe ịma aka na-adọrọ mmasị - ịgbawa ilu nke ndụ ya. Jụọ onwe gị ihe na-akpali ịhụnanya na agụụ ya na ihe na-eme ka ha dajụọ? Chọpụta àgwà ndị na-eme ka ọ hụ ndị ọgbọ ya n’anya? Ma eleghị anya, e nwekwara nwanyị nwere àgwà ndị ahụ nke pụkwara ịkpali ịhụnanya ya ma mesịa mee ka ọ dajụọ ndakpọ ahụ n'ọchịchọ mmekọahụ nke 'oke okike'.
nke atọ. Zụlitekwa ụfọdụ mmetụta ọmịiko n'ebe 'n' kwụ ọtọ'
Ndị na-eche ahụmahụ siri ike nke na-aga ije n'okporo ámá ebe ha na-ezute mgbe nile site n'aka ụmụ nwanyị ndị ejiji ọ bụla, ma ọ bụ ndị na-adịghị eji ejiji, emebere iji kpalie mmuo nke ndị na-agafe n'okporo ámá.
D. Ịmara otú e si 'pargan' onwe ya maka ihe ịga nke ọma ọ bụla, ọbụna obere na ele mmadụ anya n'ihu.
Iche echiche ka obi dị Onye Okike ya ụtọ maka ihe ịga nke ọma ọ bụla, na njụta ​​echiche ọ bụla. Ga-ibido na-enwe mmasị na yigharị nke mmuo maka awa ole na ole; Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ma emesịa karịa nke ahụ. Dị nnọọ ka ihe ọjọọ mmuo na-abịa site n'oge ruo n'oge, na-amalite ntakịrị na-aga n'ihu na ukwuu, otú 'ruo n'ókè dị ukwuu' ezi mmuo - na-aga na na ruo taa!
Chineke. Iji tinye onwe ya na nchụso ndị na-atọ ụtọ.
Ọmụmụ, ọrụ, egwu, ọrụ afọ ofufo na ihe ndị ọzọ. Ọ́ bụghị otú a ka Fero eze Ijipt kụziiri anyị: ‘Ka ọrụ ahụ sọpụrụ ndị mmadụ, unu ejikwala ụgha azọpụta ha,’ dịkwa ka ndị rabaị anyị kụziiri anyị ihe:
na. Anọla n'ime 'nsogbu' mgbe niile.
Ya mere, 'nsogbu' na-aghọ 'njirimara'. Ghọta na onye ọ bụla nwere mmasị na ọdịda nke ya, ma n'ụzọ dị iche, 'n'ụzọ dị mma mụbara' ọnụ ọgụgụ kasị elu na ihe ịga nke ọma na-aba ụba. Dị nnọọ ka Egypt bụ banyere ọdịda, onye ga-aṅụrị ọṅụ ọtụtụ ugboro na ihe ịga nke ọma nke ndụ na omume ọma, nke kpọmkwem n'ihi na ha na-abịa na mwute na ihe isi ike, dị nnọọ oké ọnụ ahịa n'ebe ahụ.
P. 'N'ihi na ọṅụ nke Chineke bụ ike gị'.
Ka mmadụ na-enwekwu mmetụta na ọnụnọ Chineke n'ụwa - ka ọṅụ na-abawanye n'ime ya. 'Ana m arịọ Onyenwe anyị n'ihu m mgbe niile n'ihi na n'aka nri m agaghị ada', na dị ka ndị na-eso ụzọ rịọrọ: 'N'ihi na n'ọṅụ ị ga-apụta' - site ọṅụ. Iji soro Chineke kerịta mmegharị niile nke ndụ, n'ịkwado ihe ọma niile na ịrịọ maka ndị na-efu efu, maka onye ahụ n'onwe ya na obodo dum. Mgbe ị na-abịarute ndụ na ọṅụ na ìhè - ị na-atụba ihe mgbochi niile.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime isi ihe dị n'ịnagide dike, ma eleghị anya, onye ọ bụla nwere ike ịchọta site n'ahụmahụ nke ya na ahụmahụ nke ndị ọzọ ezi ndụmọdụ, 'Nye ndị maara ihe ma mara ihe karịa'.
Ekele. Ekwenyeghị m na otu ahịrịokwu nke gị. Ma ka m malitere imeghachi omume na ha (mgbakọ ugboro ugboro n'etiti omume na halakhah, echiche gbagọrọ agbagọ nke omume ọma, na ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ), achọpụtara m n'oge ụfọdụ na nke a abụghị esemokwu. Ihe dị oke egwu. Ọ bụrụ na ị ga-ekwe m, echere m na akụkọ na-esonụ, nke m nụrụ n'ọnụ Rabbi Shalom Shevdron, mere ka isi ihe ahụ pụta ìhè. O kwuru na otu mgbe ya hụrụ otu nwata nwoke dara n'okporo ụzọ ma merụọ ahụ, buru ya wee malite ịgbaga ụlọ ọgwụ. N'ụzọ nile, ndị mmadụ si na windo na ndị na-agafe agafe na-etiku ya ekele, dị ka "Rabbi Shalom, ọgwụ zuru ezu" (na Yiddish, n'ezie). Ya mere ọ gbara ọsọ na-agba ọsọ na onye ọ bụla chọrọ. Mgbe nkeji ole na ole gachara, ọ hụrụ n'ihu ya otu nwanyị ka ọ na-aga n'ebe dị anya na-aga n'ihu ya na n'ezie ọ tikwara mkpu na ya, dịka onye ọ bụla ọzọ, "Rabbi Shalom, ọgwụgwọ zuru oke." O jiri nwayọọ biakwute ya ma olu ya kụdara ntakịrị. Na njedebe mgbe o mesịrị hụ onye ọ bụ (= nwa ya nwoke, n'ezie) ọ malitere iti mkpu na egwu. N'oge a ọchịchọ na ndụmọdụ ya agwụla. Na nsụgharị n'efu: Ahụrụ m otu nwoke ka ọ na-ata ahụhụ n'oge ndụ ya niile n'ihi mmerụ ahụ. N'ime ndụ ya niile ka ọ na-eje ije siri ike n'okpuru ibu ya onye ọ bụla gwara ya, "Ị ghaghị ime ka ihe isi ike ahụ bụrụ ihe ịma aka," ma ọ bụ "Nweta nghọta n'ime àgwà gị." Ndị ọzọ ọbụna nyere ya ndụmọdụ n'efu: "Site na ihe isi ike a ga-ewu." Akpọrọ ya ka ọ na-ekwu "Ndị ikpeazụ sitere na obodo". Gbakwunye ya "mara ka esi eto onwe gị maka ihe ịga nke ọma ọ bụla, ọbụlagodi otu." Ndị ọzọ wee ruo n'ókè nke ịgwa ya: "A mmetụta ọmịiko n'ebe anyị nọ na anyị adịghị ata ahụhụ na-ata ahụhụ site n'ahụhụ nke ofe" (= ihe fun ị nwere!). Ma ọ bụ "Tinye onwe gị na nchụso ndị na-adọrọ mmasị, kama ịbanye na nsogbu mgbe niile." Ma n'ezie, n'ezie, "ọṅụ nke Chineke siri ike." Mehadrin sitere na Mehadrin ga-agbakwunye ebe a: "N'ezie, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-eme nke ọma, ma anụwo m na n'oké osimiri, e nwere ndị na-anata ọtụtụ narị ọla edo na ụgwọ ọnwa ha na ndị ọrịa (ọ bụrụ na e nyere ha ezigbo nsọpụrụ n'ezie. ma ọ bụrụ na ha gara ezi ndị ọkachamara n'ezie) ee ịga nke ọma. Chineke nyere Rabbi Shalom aka." Ejighị m n'aka otú ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ dị otú a na mmadụ ga-ewetara gị ndụmọdụ ọma a niile. Amaara m ihe ọ ga-adị m. Ị gụchara ma kwuo na onye ọ bụla nwere ike site na ahụmahụ ya nweta ndụmọdụ ndị ọzọ dị mma. M na-agwa gị naanị ezi ndụmọdụ m na-enweta site na ahụmahụ m banyere ọnọdụ dị otú ahụ: na ihe ikpeazụ mmadụ chọrọ bụ ndụmọdụ nke ụdị a na ihe ndị yiri ya. Echere m na ọ ga-aka mma ka ọ nabata eziokwu ma kwuo na anyị enweghị ndụmọdụ, ma gịnị ka m ga-eme ma Nna m nke eluigwe enyewo m iwu (iwu okpukpe na nke rụrụ arụ).
Ọ ga-ekwe omume na a na-ekwu okwu Rabbi Levinger n'olu dị jụụ n'ihi na ọ dị anya na nsogbu ahụ. Ya na ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị adị ya ka nne nwa nwoke ahụ. Nke ahụ abụghị ịsị na ọ bụghị azịza ziri ezi. Mgbe ọmịiko na nsogbu nke ọnọdụ ahụ gasịrị, okwu ya chịkọtara nke ọma ihe a na-atụ anya ka onye na-edina ụdị onwe onye okpukpe mee. Karịa nke ahụ - okwu ya chịkọtara ọ bụghị ihe ọjọọ ihe a na-atụ anya ka onye Juu ọ bụla mee. Enwere ike imere onye ọ bụla ebere (ebere bụ ihe gbasara ikwu dị ka a maara nke ọma), anyị niile nwere nsogbu na nsogbu, na otu a ka onye Juu kwesịrị isi mesoo ha.
Nke mbụ, eziokwu ahụ bụ na mmadụ dị anya site na nsogbu ahụ kwesịrị ime ka ọ bịaruo nso ma ọ bụ na-ekwughị okwu n'iche dị otú ahụ na nkwupụta dị otú ahụ.
Ọ bụghị nanị na m na-ekwu banyere azịza ha kama banyere otú e si asụ ha. Ma ọbụna azịza n'onwe ha ezighị ezi. Nke mbụ, ọ dịghị nsogbu omume ọ bụla ebe a, ọ bụkwa ebe ahụ ka mkparịta ụka ahụ malitere. Nke abụọ, ọtụtụ n'ime ndụmọdụ ndị a adịghị enye aka. Ụfọdụ na-egosipụta eziokwu n'ụzọ na-ahọrọ na eleghị anya. Akụkụ ọzọ na-akasi ya obi na-abaghị uru. Otu onye ahụ na-ata ahụhụ nwere ike kpebie imeri Kari ma eleghị anya ọ ga-aga nke ọma, ma ị gaghị enye ya ndụmọdụ site n'akụkụ nke Kari ga-emeri na ọṅụ nke Chineke bụ ebe siri ike ya. Ma tinyekwuo ya na ọ na-eme omume rụrụ arụ n'ihi na ọ na-emechu ndị mụrụ ya na Onye Okike ya ihu.
E wezụga nke ahụ, o yikarịrị ka ọ gaghị enwe ike idi ya, dị nnọọ ka onye ọ bụla n’ime anyị na-agaghị enwe ihe ịga nke ọma n’ọnọdụ ya. M ga-atụ anya ntụaka maka nke ahụ kwa. Gwa ya na ọ bụghị egwu, ebe ọ bụ ọrụ siri ike na ọ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume. Nke a bụ kama na-ehota efu n'amaokwu na-edoghị anya ọkachamara ahọrọ na tweezers na-adịghị enyere ya aka (ma ọ bụrụ na ha bụ "ọkachamara", n'adịghị ka niile psychiatrists n'ụwa, ma ọ bụrụ na o kwere na kpebisiri ike.
Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo enyi nke onye dị otú ahụ ma nwee ike ịkpali ya ime mkpebi siri ike ma kwado ya - ọ ga-ekwe omume. Ma ọ bụghị dị ka ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ n'ozuzu maka ime ihe dị otú ahụ dị egwu ọnọdụ.
Okwu m ga-abịa n'oge adịghị anya ebe a, ebe ahụ ka ọ ga-edotụkwuo anya.
N’abalị itoolu nke Elul, XNUMX
Ezigbo ụmụ nwoke,
Tọzdee gara aga, Rabbi Michael Avraham Neru jụrụ "Gịnị ka nwoke ahụ kwesịrị ime" ka ọ pụọ n'ọnọdụ ya. M wee kpebisie ike ime uche ziri ezi, m wee zaa ajụjụ ya dị ka m maara na dị ka ahụmahụ m.
Dị ka onye Juu, onye, ​​dị ka onye ọ bụla ọzọ, 'gbaara ọtụtụ ihe ngosi', gafere ọgba aghara na ebili mmiri, elu na ala, wdg, wdg - Enwere m ike ichikota ụzọ nke ime ihe na iche na m ga-enyere aka imeri nsogbu m. o nwekwara ike inyere ndị ọzọ aka imeri nsogbu ya.
Echefuru m isi okwu ọzọ, nke batara n'okwu gị, ma eleghị anya ọ bụ nke mbụ:
H. Nọgide na-enwe ahụ iru ala na obi iru ala n'ọnọdụ kachasị njọ.
Kedu ihe ga-enye na gịnị ga-eme ka ị ghara iwe iwe? Mgbe ị na-eme ihe site na nchekasị, mgbagwoju anya na 'nrụgide' - naanị ị ga-etinye aka na imikpu n'ime apịtị ọzọ.
Ya mere jide onwe gị, jiri nwayọọ nyochaa ọnọdụ ahụ. Ị ga-amụta isiokwu ahụ, site na akwụkwọ na ndị ọkachamara; Ma ọ bụghị ihe na-adịchaghị mkpa, mụta n'onwe gị: ịmata ihe na-eweda gị ala na ihe na-ebute gị elu? Kedu ihe na-enye nsogbu na ihe na-enye obi ụtọ?
N'ezie, nke a bụ ihe ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ndụmọdụ na-eme: soro gị nọdụ ala wee mee 'ntụgharị uche' na gị, na site na nke ahụ, ị ​​ga-esi nweta nghọta na mgbọrọgwụ nke nsogbu ahụ na ụzọ isi dozie ya.
Okwu gị gbasara 'nne nwa' nke na-ewere ọnọdụ nwa ya kpọrọ ihe, edobeghị anya. Mụ onwe m kwukwara banyere oké ahụhụ ndị nne na nna na-enwe n’agbanyeghị nsogbu nwa ha nwere, bụ́ ahụhụ na-adị ọbụna ma ọ bụrụ na ha emerie mkpu ákwá ha n’obi.
Ọbụna Aịzaịa, bụ onye na-eje ije n'iwu Chineke ka e kekọta - obi ya na-ewute ya maka iru uju nke nne ya nke 'gbanwere ihu ya, nwa nwoke a mụrụ afọ iri itoolu, bụ maka ọkụ na nri, ọ dị m nwute maka nne ya ibe akwa na akwa'. Ka anyị gọzie dị ka Josef na onyinyo nke ihe osise nne na nna anyị ga-adakwasị anyị n'oge ọnwụnwa siri ike.
Mbụ, ọ bụ ezie na m na-elegharị anya gburugburu m, ahụghị m ebe a onye ezi omume nke ọ chọrọ imezu, a ga m arịọ mgbaghara maka ịdị nkọ nke ihe ndị m dere na oké ifufe nke arụmụka. Mazị dị ka ọ na-adị na-ekwu okwu ntule na nkwanye ùgwù, na mụ onwe m n'ajọ omume m nwoke na-agba ọsọ.
Ọ dị m ka n'azụ bụ nkwupụta ị kwuru banyere omume rụrụ arụ nke okwu ahụ nke m kwenyesiri ike na ya, ha hapụrụ mmetụta na akara ọbụna n'okwu ndị ọzọ dị ilu nke bịara mgbe e mesịrị. Echere m na e nwekwara otu akụkụ n'igosi ihe, ọ dịkwa m ka ọ dị ntakịrị n'anya m.
N'ikpeazụ, ọ ga-ekwe omume ịchọta n'okwu gị ihe enyemaka nye onye na-emeghị mkpebi, mana m ka na-eche na ọ ka mma itinye ha n'ọnọdụ dịtụ iche, dịka m kwuru n'oge mkparịta ụka ahụ.
Kachasị mma na ọzọ nwute.
Gwa onye ahụ na-ata ahụhụ: Ị furu efu. Ị nweghị ohere. O nweghị uru ịga ụlọ ọgwụ ma ọlị. Gaa ozugbo n'ebe a na-eli ozu.
Mgbe ahụ mkpesa banyere igbu onwe. Ma eleghị anya, ndị ezi omume nke ụdị gị na-eweta ndị na-arịa ọrịa obi nkoropụ na igbu onwe ha?
E nwekwara ụzọ ọzọ. Ọ ga-ekwe omume inye ha ndụmọdụ bara uru (ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ihe nwute, na ọ bara uru ịkọwa ya n'eziokwu na ọ bụghị ịcha ọcha), ma na-enweghị ndụmọdụ ọ bụghị ndụmọdụ ndị a, na-enweghị nkasi obi nsogbu nke ị nyere ga-eme ka obi dịkwuo njọ (mgbe ike na ọṅụ nke Chineke).
N'ezie, ọ bụghị ihe ziri ezi ịse ha foto na-enweghị atụ na nke a na-apụghị ịdabere na ya (dị ka a ga-asị na ndị a na-emeghị nke ọma bụ ndị na-agwọ ọrịa na-enweghị nkà, dị ka a ga-asị na onye kwere ekwe na-aga nke ọma).
Na ọbụna obere eziokwu na-akọwara ha na ha bụ ndị rụrụ arụ n'ihi na ndị mụrụ ha etinye ego na ha na Onye Okike ha na-atụ anya n'aka ha na ha dị nnọọ ada ada na-etolite n'ime okwukwe ha. Ọ bụ eziokwu? Otu a ka esi aza aza mkpagbu nile (R. Barar na Yitzha AA, XNUMX)?
Na kwa gbasara echiche nke omume nke ị gosipụtara. Na ọ bụrụ na nne na nna m chọrọ ka m buru otu narị kilogram n'azụ m niile ndụ m, m ga-eme ya n'ihi ekele? Enwere ebubo omume dị otú ahụ? Echetara m gị Maharik maka ịhọrọ onye ọlụlụ. M na-ekwu na anyị na-ekwurịta banyere omume na ọ bụghị halakhah. A ga-enwerịrị ụgwọ halakhic dị otú ahụ. Mana ikwu na enwere ebubo omume? Mgbaghara, ọ bụ naanị gbagọrọ agbagọ. N'ozuzu, ekele nye Chineke adịghị mfe ma ọlị, na n'echiche m, ọ bụghị n'omume omume kama nke nkà ihe ọmụma. Lee akụkọ ebe a:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94/מעבר Maka ihe a niile, ọ dị ezigbo mkpa ịkasi ha obi na ọ bụrụgodị na ha ada, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ọzọ agaghị akwado ya. Na anyị achọpụtala na Ketubot Lag ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ya ka Hananaya Mishael na Azaraịa nko ngalaba na-ese foto, aha ya nke ọma na ihe dị iche n'etiti na-aga n'ihu nwayọọ nwayọọ na-ata ahụhụ na oké ma obodo na nwa oge nhụjuanya.
Okwu banyere ohere nke ịga nke ọma bụ okwu Dr. Zvi Mozes, onye isi ụlọ ọrụ Shiloh, otu n'ime ndị ọkachamara kachasị elu na mpaghara anyị. Ọ na-ekwukwa hoo haa na ọ bụrụ na àgwà mgbanwe doro anya na-esi nnọọ ike, ma ndị kpebisiri ike ma nwee okwukwe siri ike pụrụ inwe ihe ịga nke ọma site n'enyemaka ndị ọkachamara kwesịrị ekwesị.
Okwu m ndị ọzọ bụ ihe doro anya. Ị chere na Rabbi Kolon bu n'obi ikwe ka onye lụrụ di na nwunye cheta? 🙂 Ònye kwere ka nwoke soro nne na nna ya n'elu ebe ịchụàjà nke agụụ mmekọahụ ya? Ọ bụrụ na ọ gbapụghị n’obí, ọ ga-eyi uwe ojii ma kechie onwe ya n’oji, wdg ”na ọ gaghị emebi ndụ ndị mụrụ ya n’oké iru uju.
Ọ dịghị onye a na-azọpụta site na mkpagbu ya na nhụsianya. Jụọ onye ọ bụla na-elekọta mmadụ na ọ ga-agwa gị
, Na ntọala nke ihe ndị ahụ bụ ime ka onye ahụ pụọ na mmetụta nke onye ahụ. Ozugbo mmadụ na-ewere ọrụ maka akara aka ya - ọ ga-achọtaworị ụzọ a ga-esi gbapụta ya. Ma ọ bụrụ na ọ dị oke egwu - ọ dịkwa oke egwu, asụsụ nke iwe ..
N'ihe niile gbasara "ngalaba anyị" ị na-eleghara ọnọdụ dị iche iche anya nke taa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkachamara nkwekọrịta (Abụghị m ọkachamara na m nwekwara ụfọdụ enyo banyere nkwenye a, ma ị na-eleghara ya anya na mkpịsị akwụkwọ pen. n'ihi na Dr. Ya mere-na-ekwu). Ọzọkwa, ọbụna okwu nke ya, ma ọ dịkarịa ala dị ka i hotara ha, dị nnọọ ala azụ. Enwere m ike ịsị na ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike ma kpebisie ike na ọchịchọ gị ezughi oke, ị nwere ike imeri. Mmadụ ole dị? Ma ole ndị ọzọ? Olee otú ọtụtụ n'ime ha nwere ihe ịga nke ọma? O nyere nọmba? Sayensị na-arụ ọrụ na quantitative atụmatụ na ọ bụghị na slogans (ma eleghị anya, o welitere ya niile, ma site na ihe i kwuru na m ahụghị ihe ọ bụla na ya).
Okwu gị ndị ọzọ doro anya n'ezie, dịka ndị bu ha ụzọ. Ònye nọ ebe a kwuru na Maharik bu n'obi ikwe ka echeta? Na na anyị na-emeso ndị ikpe ?! Ọ bụrụ na ị ghọtaghị, m ga-akọwa ihe m kwuru. Usoro gị nwere ọrụ omume ime ihe ndị nne na nna tụrụ anya n'ihi na ha mụrụ m ma tinye ego n'ime m. Ya mere, ọ bụrụ na ha arịọ m ka m lụọ nwunye ma ọ bụghị onye a na-amaghị aha - n'echiche gị, m gaara erubere ha isi, nri? N'ezie ọ bụ. Ma ihe na-eme, ọ na-ekwu mba (na-achịkwa na Rama). Ebee ka omume dị ebe a? Ihe ọ pụtara: Ọ dịghị ibu ọrụ dịịrị mmadụ irubere ndị nne na nna isi n'ịhọrọ onye òtù ọlụlụ. Ha enweghị ikike ịjụ m ihe banyere ndụ m. Ya mere, gịnị ka ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na echetara ya ma ọ bụ na echetaghị ya? Ọdịiche dị n'etiti ha bụ halakhic, mana ị kwuru maka ọrụ omume ime ihe ndị nne na nna chọrọ, ọ nweghịkwa ihe dị iche n'okwu a. N'ụzọ megidere nke ahụ, ịhọrọ nwanyị kama ịbụ nwoke bụ nnukwu nhụjuanya na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume nye nwa ya nwoke, ma dochie otu di na nwunye na ibe ya bụ ihe dị mfe na-enweghị atụ. Ya mere, gịnị mere na ọ dịghị mkpa ime nke a? Na n'asụsụ gị: onye kwere ka nwoke kee nne na nna ya ma mee ka ha nwee obi mgbawa n'ebe ịchụàjà nke agụụ mmekọahụ ya nke na-eduga ya n'otu ụdị nwunye ọ chọrọ. Onye ga-eme ka agụụ mmekọahụ ya lụta onye ọzọ ma mee ka nne na nna ya nwee afọ ojuju dị nsọ. Na n'ozuzu, ọ bụrụ na ọ bụghị ahụ iru ala ma na-esiri ya ike - ka o kpebisie ike ma kwere ma gaa Dr. Moses na ọ ga-enyere ya aka imeri. Kedu ihe bụ nsogbu?
N'ihe gbasara njedebe nke okwu gị, onye nwere ọrịa kansa ga-achọta ụzọ a ga-esi zọpụta ya ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwere na onwe ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa onye ọ bụla ọzọ na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala. Ndị a bụ slogans ndị obi abụọ adịghị ya na enweghị mmasị na obi abụọ adịghị ya na New Age nzuzu. Ha na-akpọghachi m azụ n'akụkọ Rash Shevdron. Ọ dị mfe ikwu mgbe ị na-ekwu banyere ndị ọzọ ị na-achọghị ịma. Jụọ onye ọ bụla na-elekọta mmadụ na ọ ga-agwa gị nke a.
Ka anyị malite na ngwụcha:
A sịghị m na a ga-azọpụtarịrị onye nwere ọrịa kansa. Ekwuru m na onye nwere nnukwu ọrịa nke yiri ọ nweghị ọgwụgwọ, na-achọ ọgwụgwọ. Eze, bú Hezekaia, bú onye-amuma nke Chineke, we si ya, N'ihi na i nwuru anwu, i gaghi-adi kwa ndu. Ị chọọ ma chọọ, ị na-enweta ikpe nke eluigwe na ịhụnanya, e nyere dọkịta ikike ka ọ gwọọ - ọ bụghị inwe obi nkoropụ.
E nwere otu onye Juu ọ hụrụ n’anya, bụ́ R. Cohen-Melamed, bụ́ onye nwere ọrịa akwara ihe karịrị afọ 15 gara aga, otu n’ime ndị dọkịta gwaziri ya na ọ fọrọ nanị ọnwa ole na ole ka ọ dị ndụ. Dr. Melamed egeghị ya ntị. ma dị ndụ ruo taa ma na-ede akwụkwọ Ka ọ dị ugbu a, o jisiri ike gaa olili ozu nke dọkịta nke mesiri ya obi ike na ọ ga-anwụrịrị):
Banyere ọchịchọ -
Abịaghị m ime mkparịta ụka nkà ihe ọmụma na sayensị, ee ọ gaghị ekwe omume? - Ahụrụ m n'anya m naanị otu ọnụ ọgụgụ, nwa okorobịa ahụ nwere mgbagwoju anya na ihere gbawara n'etiti ọchịchọ ya na okwukwe ya. O nweghị ụzọ dị n’ụwa a ga-esi pụọ ma onye kere ya na onye kere ya. Ogwu ubọọn̄ ya isibi isibi isibi akọn̄ kan̄ isibi isibi akọn̄, mè isa igọọk ema mêkọt inyọn̄ ijọn̄ ya isibi isibi.
Enwere m ntakịrị egwu 'ndụmọdụ uche', n'ihi ọtụtụ ihe: ha nwere oke nchekwube, na nwoke na-abịa na atụmanya dị elu na karịsịa atụmanya nke ihe ịga nke ọma ozugbo, nwere ike ịdaba n'ime obi nkoropụ. E wezụga nke ahụ, e nwere ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa bụ ndị ọrụ afọ ofufo na-abụghị ndị ọkachamara. Na maka 'usoro ugboro ugboro' ha, nke na-anwa 'ịkwalite ikike nwoke' - ọ dị mma naanị maka ụfọdụ, ma ọ dịghị ka m na nke a bụ ihe kpatara ikpe niile.
Ọ bụ ya mere m ji tụgharịa na ntụziaka Dr. Zvi Mozes, onye m na-amaghị n'onwe ya, ma ya nchekwube ma dị nnọọ nlezianya style - na-akpali nlezianya nchekwube na m. Mụ na gị, m na-ehota ya obere oge. N'okwu m na isiokwu abụọ nke Yoav Sorek, ọ na-esiri m ike idetu paragraf abụọ bụ isi na nkwupụta ya nke na-akọwapụta ohere na ohere ha (n'ihi na 'Njikọ' Amaghị m otú e si eme ya, ka m 'Linkopov' enweghị ọgwụgwọ :).
Ahụmahụ nke onye na-agwọ ọrịa vetiran soja n'ọhịa, anaghị aga n'ụkwụ ... na ọ bụ ọrụ anyị na-agwa ndị na-emeghị mkpebi banyere ịdị adị ya, na ohere nke ịnwa ịnweta enyemaka site na ya.
Nkọwa gị na Maharik na nwa anaghị eji ihe ọ bụla n'aka nne na nna ya amachaghị. Ọ dị m ka ụfọdụ ndị na-aghọta na nke a bụ maka nsọpụrụ nna a jụrụ n'ihi mitzvah nke nwa nwoke ịlụ nwanyị, na ọ bụrụ na ọ chọta nwanyị kosher na ọ hụrụ Man Mifis n'anya ọ ga-achọta ya? Dr. Moses nwere ike inyere nwoke chọrọ ime Kono chọọ ịhapụ alụmdi na nwunye a machibidoro iwu, ma hapụ ezi alụmdi na nwunye na eluigwe na ụmụ mmadụ - Chineke ekwela.
Ma otu o sila dị, ọ bụrụgodị na nwa okorobịa ahụ kwere ma nye ya iwu ka ọ lụọ di ma ọ bụ nwunye n’obi ya megide ọchịchọ nke ndị mụrụ ya, ọ ga-ejirịrị nwayọọ na nkwanye ùgwù gwa ha ihe ọma na ihe na-akasi obi. Ịsị ha: 'Ezigbo nne na nna, ahụrụ m ihe niile unu meere m n'anya, na-ejikwa m n'aka na ị ga-enwe obi ụtọ dị nsọ site n'aka nwa agbọghọ ezi omume a na nwanyị di ike'. Na na-emekarị ọbụna ma ọ bụrụ na ha adịghị emekọrịta ozugbo - ha ga-eme ka ha dịghachi ná mma mgbe a mụrụ nwa nwa.
Kedu ihe ụtọ ha ga-enweta site na mmachibido iwu Cretan nke e kere nke a na-akpọ 'ihe arụ'?
Edere m mgbaghara na saịtị ahụ maka ịdị nkọ nke okwu m, m na-ekwughachikwa ya ebe a (Aghọtaghị m ihe mere e ji eme ya na channelụ abụọ. Ahụghị m ihe ndị a chọrọ nzuzo gabiga ókè. Achọpụtara m na ụfọdụ n'ime ha. e zigara mkparịta ụka ahụ na email ebe a).
N'ezie, ihe na-enye m nsogbu n'obi bụ ihe ndị gbara m gburugburu, mana ekwetaghị m nke ukwuu na ọdịnaya ahụ. Na ụdị nke ụdị gị ga-emetụta.
Maka Maharik na echiche nke ịsọpụrụ mpaghara ndị ọzọ, lee okwu m n'ime akụkọ ebe a:
https://mikyab.net/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA/בכל N'ụzọ, o doro anya na ụdị okwu n'ebe ndị nne na nna kwesịrị ịkwanyere ùgwù.
Kachasị mma na ọzọ nwute
Anya onye na-agụ:
Na S.D. XNUMX na Elul, p
Mkparịta ụka mụ na Rabbi Avraham n'oge na-adịbeghị anya nke mere n'etiti anyị na ozi-e nkeonwe, ma ebugoro na saịtị ahụ n'abalị a - abụghị Maikra bu n'obi ka e bipụta ya na saịtị ahụ, ekwesịrị ka ewere ya dị ka 'draft', nke na-apụtachaghị ìhè. gosipụta nkwubi okwu ọnụ.
Ana m arịọ mgbaghara maka nghọtahie ahụ. Dị ka m dere, echere m na n'amaghị ama, ihe na-aga na email mgbe niile kama ịga na saịtị ahụ, ma ahụghị m n'ime ha ihe ọ bụla sitere na okwu ahụ mere ebe a na saịtị ahụ, n'ihi ya, m zigara ha (na ozugbo. ) bulite na saịtị. Naanị ugbu a ka ha bilitere n'ihi na ọ bụ naanị ugbu a ka arụmụka agwụla. Na n'ezie ikpeazụ posts n'etiti anyị mgbe m ghọtara na ha na-adịghị pụtara maka ebe a m bulite. Agbanyeghị, ndo ọzọ.
Nye onye amamihe Rabbi MDA, juputara n'amamihe na sayensị, dị ka onye akụ na ụba na obi ike a pụrụ ịdabere na ya, Delbish Mada, na-amụ Torah na-akụzi ya, na-ekpukwa okpueze n'ihe ọ bụla, ziri ezi na nsọpụrụ - ga-agbatị udo ya na Hada, ma mụbaa Torah na asambodo, iji mee ka anya obodo mara! - Udo na nnukwu nzọpụta;
M ga-achọkwu nke a, ihe mere obodo ahụ ji kwesị ekwesị banyere nsogbu ahụ na ọgwụgwọ ndị ọkachamara ọkachamara na-agụnye nnukwu ego ego, nke na-egbochi mgbe ụfọdụ ndị chọrọ ha, na-eme ka o siere ha ike ịnọgide na-eso ha.
Na Kochav Hashahar na gburugburu ya, ha chọtara ngwọta site n'ịmepụta ego a na-akpọ 'Chaim Shel Tova' (nke Rabbi Natan Shalev, rabbi nke Mevoot Jeriko na-achịkwa), nke na-enyere aka ịkwado ezinụlọ na di na nwunye ọgwụgwọ mgbakasị uche maka ndị nọ ná mkpa.
Ọ bara uru ịnakwere usoro omume a na mpaghara na mpaghara ọ bụla, na ịmepụta ego yiri nke ahụ ga-agba ume ma nyere aka na nlekọta ahụike uche ọkachamara maka onye ahụ na ezinụlọ.
Nwa-okorọbia ahu kwuru okwu n'ọnu-ọgugu ndikom abua na ọgu iri nke Juda, n'ihi aka-ya di nsọ;
Damchavi Kida, ekele na ekele, S.C. Levinger
Shalev na Yesha Rab nye Maazi Chen Chen maka ọchịchọ na nkọwa ya.
Na n'ime ya na n'ime m, anyị ga-ejide wee na oké ifufe, a na-eme mkpara onye isi na-efegharị. Ọ -bụru l'o nweru onye Rom sụ g'e gude mma-agha ye aya, maranụ l'a-bụru Jerúsalemu l'alị ọgu.
Anyị ga-emeri Lior n'ìhè nke ọkụ, a ga-azọpụtakwa anyị n'iwu obi ọjọọ niile. Madu gāsi nwa-nne-ya n'oké olu, umu-ndikom na umu-ndinyom, ha na onye nēje ozi nāb͕a ọsọ. M ga-abịanye aka na akwụkwọ anamachọihe nye onye bi n'ime ahụ a tara ahụhụ, onye anyị ga-edebanye aha maka ịdị mma n'afọ a.
30 Tishri 10 - 2016/12/35 na XNUMX:XNUMX
A ga-achọta mkparịta ụka gbasara isiokwu a n'oge opupu ihe ubi n'isiokwu:
Roni Schur, 'Ọ ga-ekwe omume ịgbanwe (na ọgwụgwọ nke iche echiche na' Advice of the Soul '), Tzohar XNUMX (XNUMX), na' Asif 'website;
Rabbi Azriel Ariel, 'Onye ọ bụla nwere ike ịgbanwe? (Nzaghachi) ', n'ebe ahụ, n'ebe ahụ;
Dr. Baruch Kahana, 'Religion, Society and Reverse Tendencies', Tzohar XNUMX (XNUMX), na webụsaịtị 'Asif'.
Dr. Zvi Mozes, 'Ngwọta nke Mgbanwe Mgbanwe Na-adị irè n'ụzọ Psychologically', na weebụsaịtị 'Root'.
Nchịkọta zuru ezu nke ụdị ọgwụgwọ na njide na ọnọdụ ọjọọ - na Wikipedia, ntinye 'ngwọta ntụgharị'.
Enwetala m nzaghachi nke ọha psychoanalytic na Israel na "okwu ndị rabaị":
Dị ka ndị ọkachamara n'akparamàgwà mmadụ bụ ndị raara onwe ha nye nghọta miri emi nke psyche mmadụ ma na-enyere aka na nhụjuanya ha site na psychotherapy, anyị na-ewere na ọ bụ ọrụ anyị ime mkpesa okwu mkparị nke ndị rabaị kwuru na nso nso a gbasara obodo LGBT. Na-ekwu na nwoke idina nwoke bụ nsogbu uche, "ngbanwe", "nkwarụ nke na-achọ ọgwụgwọ nke uche", mejupụtara ajọ mmebi nke ùgwù mmadụ na nnwere onwe - na-emegidekwa ọnọdụ a nabatara nke oge a na ihe ọmụma ọkachamara nke oge a banyere nhazi mmekọahụ na njirimara. Inye 'nchọpụta nke uche' site n'aka ndị rabaị na ndị nkuzi na-azụbeghị maka nke a bụ ihe na-ezighi ezi ma anyị na-ahụ n'ezie nkwupụta nke echiche ndị dị otú ahụ dị ka ezigbo ihe egwu nye mkpụrụ obi na ọbụna ndụ ndị ntorobịa na ezinụlọ ha.
Yossi Triast (Onye isi oche) - n'aha Psychoanalytic Society na Israel
M na-eche ma nwoke ahụ bụ onye nzuzu ka ọ bụ onye ụgha. Ihe ọ na-ede bụ ihe efu n'ezie. O nwere ike inwe otu ọnọdụ ma ọ bụ ọzọ na ajụjụ banyere ma nwoke idina nwoke ọ bụ ihe gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ma o nwere obere ihe jikọrọ ya na ọkachamara ihe ọmụma o nwere ike inwe. Ya mere ọ dị ka onye nzuzu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ụma na-erigbu okpu ọkachamara ya iji kwalite atụmatụ bara uru, ọ bụ onye ụgha mgbe ahụ. M na-ahapụ onye na-agụ ka ọ họrọ n'etiti nhọrọ.
20 Tammuz 07 - 2020/14/43 na XNUMX:XNUMX
Echeghị m na ọ bụchaghị onye nzuzu. Enweghị mmata na-akpasu iwe n'ebe ahụ, ọ na-apụtakwa na ndị nwere ọgụgụ isi. Ọ bụrụ na i jiri ihe were ogologo oge na-asa onwe gị ụbụrụ, ị ga-amalite iche na ọ bụ eziokwu na ihe na-agaghị agwụ agwụ. O di nwute na nke a na-eme ntakịrị.
20 Tammuz 07 - 2020/15/00 na XNUMX:XNUMX
M zara Pingback ebe ahụ
Azụ azụ: Mara ọkachamara Na iwu na nkọwa
Hapụ ikwu	kagbuo
Iji nye okwu nkuzi, ị nwere ike ịkpọtụrụ Dafna Avraham site na ekwentị ma ọ bụ WhatsApp
Ị nwere ike ịzụta nchịkọta ndekọ nke usoro ọmụmụ gara aga (echiche siri ike, scholarship yeshiva, philosophical thinks, contemporary and elitist and synthetic Judaism) n'ihu Daphne na 052-3322444 nakwa maka NIS 250 kwa N'ezie.
E wepụtala mbipụta ọhụrụ nke trilogy akwụkwọ akụkọ ugbu a, nke gụnyere ọtụtụ ndozi, mana ndị a na-abụkarị ndozi mbipụta na enweghị mgbanwe dị ukwuu na ya. Tụkwasị na nke ahụ, e bubata akwụkwọ ọhụrụ.
A na-ere akwụkwọ ndị ahụ dị ka trilogy zuru ezu maka NIS 180 ma ọ bụ NIS 70 maka otu akwụkwọ. Enwere ike ịnata ha na Lod ma ọ bụ na Jerusalem, ma ọ bụ jiri onye na-ebuga ya gaa n'ụlọ na 42 NIS.
Na mgbakwunye, e nwere ọtụtụ akwụkwọ ndị ọzọ "Ọ dịghị mmadụ na-achị na Mmụọ" si na nke mbụ mbipụta. Enwere ike zụta na mbelata (NIS 30). Otu trilogy nwere abụọ ọhụrụ 150 NIS.
Maka ajụjụ na ịzụta: Daphne 052-3322444
Ọhụrụ: Nnomi dijitalụ nke akwụkwọ atọ: Nke mbụ chọtara
Ọ dịghị onye na-achị na mmụọ
Na-eje ije n'etiti nguzo
Ọmụmụ ihe dị ndụ na mbugharị
A na-eme klaasị dị ndụ na Zoom n'oge ndị a:
Tọzdee, 20: 45-22: 00
Fraịde, otu ugboro kwa izu abụọ, 9: 00-10: 00
Mgbe nkuzi a gachara, a ga-enwe mkparịta ụka ghe oghe na ajụjụ ndị ndị sonyere ga-achọ ikwurịta ka ha masịrị (ọbụlagodi ndị na-enweghị ihe gbasara nkuzi). A na-edekọ ma bulitekwa nkuzi niile chọta. Ị nwere ike ịnweta klas nkuzi mbugharị na njikọ a:
Iji sonyere otu WhatsApp nwere mmelite gbasara klaasị na ụbọchị ha, ziga email na: orenmarg@gmail.com
"Ihe ọghọm dị ukwuu nke egwu Chineke mgbe ọ na-ejikọtaghị ya nke ọma na ìhè Torah bụ na kama ịtụ egwu mmehie, egwu nke echiche na-anọchi anya ya, na ebe ọ bụ na mmadụ malitere ịtụ egwu iche echiche, ọ na-emikpu n'ime mmụọ. apịtị nke amaghị, nke na-ewere ìhè nke mkpụrụ obi ya. , Na-eme ka mmụọ ya sie ike ”(Rabbi Kook, faịlụ asatọ, A. Razz)
"Ya mere, ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ịhapụ ihe ọ bụla na-emegide echiche ya, ịhụnanya nke ajụjụ na ihe ọmụma." Kama, a na-ekwu ihe dị ka nke a: Kwuo ka ị chọrọ… n'ihi na okwu onye mmegide na okpukpe na-apụ n'anya, ọ bụghị (ma) naanị na enweghị isi na adịghị ike nke okpukpe ... n'ihi na uche na-achọ ka ọ ghara igbochi ya. ma ihe niile… na site na nwoke a na-abịa na ọdịnaya nke eziokwu nke ihe na-eguzo na zuru okè eziokwu, na ọ dịghị kwarantaini maka ihe ndị dị otú a. Maka dike ọ bụla nke chọrọ imegide mmadụ iji gosi ike ya, ọ na-agụsi ya agụụ ike na onye na-abịa megide ya ga-emeri ihe o nwere ike ime, mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ merie [dike] nke bịara imeri ya ọ dị ka onye mmeri kacha bụrụ dike.” (Bier Hagola, Beer Shiva, Maharal si Prague).
Maka ịzụrụ akwụkwọ ndị dị ọnụ ala
Nkọwa na echiche maka ndị na-agụ akwụkwọ
Ebe nrụọrụ weebụ Facebook
Nweta ozi ọhụrụ site na email
Soro ndị ndebanye aha 3,094 ọzọ
Maka ndepụta nke posts niile
Banyere kọlụm 36
Ịmepụta nkwenye na ezi uche na ndị na-enweghị uche
Nlelị Chineke site n'ịgafe na-acha uhie uhie
Anyị rahụrụ ụra
Ebe ha nọ
Maka ndị nwere mmasị ịgbaso nzaghachi ndị ahụ n'ụzọ dị mfe, a na-atụ aro ka ị debanye aha maka ọkụ ọkụ okwu n'okpuru ngwaọrụ.
Adịbeghị anya Comments
Mmmmmmmmmm Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Ori Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Haim Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Michi Gbanye Nbili na ọdịda nke Bennett na ihe ha pụtara (Osisi 486)
Maka ndepụta agbatịkwu nke kwuru nso nso a
WhatsApp otu ndị na-agụ saịtị
Ọwa Telegram maka mmelite post
זכויותיוצרים 2022 Rabbi Michael Avraham | Kwadoro site na Astra WordPress Okwu